#FreeMaxenceMelo: Nenjehin’ny Manampahefana Amin’ny Lalàna Mifehy Ny Heloka Antserasera Ny Tompon’ny Tranonkala Mpanao Ampamoaka ao Tanzania · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2016 4:30 GMT
Pikantsarin'ny Forum Jamii sy sarin'i Maxence Melo, nozaraina tao amin'ny Twitter.
Nosamborina tao Dar Es Salaam, Tanzania i Maxence Melo, mpiara-manorina ny tranonkala Tanzaniana mpanao ampamoaka sy fifanakalozan-kevitra Jamii Forums tamin'ny 13 Desambra, satria nandà ny fangatahan'ny polisy hamantatra ny mombamomba manokana an'ireo mpikambana. Nanao bemidina tao amin'ny biraon'ny Jamii Forum ny polisy tamin'ny 14 Desambra, ary natao famotorana ny mpiasa maro hafa .
Noho ny Lalàna vaovao mifehy ny Heloka An-tserasera mampiadihevitra ao Tanzania izay efa nampiasaina hanenjehana mpiserasera media sosialy marobe hatramin'ny nandaniana azy tamin'ny 2015 no iampangana an'i Melo.
Iray amin'ireo tranonkala malaza indrindra ao Afrika Atsinanana ny Jamii Forums, natsangan'i Maxence Melo sy Mike Myshy tamin'ny taona 2006. Fantatra amin'ny adihevitra ara-politika mahery vaika sy fanambarana fisiana kolikoly mandeha ao anatin'ny fanehoan-kevitra sy ny adihevitra, ary mitovy fomba fiasa amin'ny Reddit ny Jamii (midika amin'ny teny Swahili hoe “fiaraha-monina”) Forums. Miverimberina hatrany ny fiatrehan'i Melo ny haika avy amin'ny manampahefana federaly sy ara-panjakana hatramin'ny nanombohan'ny Jamii Forums, izay ivoahan'ireo fiampangana ara-kolikoly ataon'ny manam-pahefam-panjakana sy ny mpikambana ao amin'ny antokon'ny fitondrana.
Milaza i Benedict Ishabakaki, iray amin'ireo mpisolovava enina miaro an'i Melo, fa ny fisamborana sy ny fitazonana azy dia manaraka ny raharaham-pitsarana Ambony nampidirin'i Melo, izay mangataka amin'ny fitsarana mba hamerina handinika indray ny andini-dalàna mifehy ny Heloka Antserasera nivoaka tamin'ny taona 2015 ao Tanzania izay manome fahefana betsaka ho an'ny mpitandro filaminana mba hikaroka sy handraoka fitaovana sy rafitra elektronika sy ara-solosaina. Ankoatra ny fandavàna ny hamoahana ny tahirin'ny mpiserasera izay nangatahan'ny manam-pahefana noho ny Lalànan'ny Heloka Antserasera, milaza i Melo fa tsy manaraka ny lalam-panorenana izy ireo ary manohintohina ny fahalalaham-pitenenana ao Tanzania izany lalànan'ny heloka antserasera izany. Nanizingizina ihany koa izy sy ny mpiasa ao aminy fa mitahiry ny mombamomba ny mpiserasera amin'ny endrika voaaro, amin'ny lohamilina ao ivelan'ny firenena ny Jamii Forums.
Rehefa notazonina 3 alina tany am-ponja, dia nentina tao amin'ny Fitsarana tao Kisutu i Melo ny marainan'ny 16 Desambra. Voampanga ho nanakantsakana famotorana, izay mandika ny fizarana faha-22 (2) voalazan'ny Lalàna mifehy ny Heloka Antserasera taona 2015 sy fitantanana sehatra tsy voasoratra ara-panjakana ao Tanzania, mifanohitra amin'ny fizarana faha-79 (c) ao amin'ny Lalàna nivoaka tamin'ny taona 2010 mifehy ny Fifandraisana amin'ny Paositra sy Elektronika izy. Ekipa mpisolovava enina malaza ao amin'ny firenena no nisolo tena azy.
Nentina tao amin'ny fonja Keko tao Dar Es Salaam i Melo avy eo. Hiakatra fitsarana izy amin'ny Alatsinainy.
Nivoaka nanohana an'i Melo ireo mpikatroka mpandala ny fahalalaham-pitenenana sy vondrona haino aman-jery marobe ary fikambanana mpiaro ny zon'olombelona, anisan'izany ny Fiaraha-miasa amin'ny Politikan'ny Teknolojiam-baovao sy ny Fifandraisana Iraisampirenena ICT ao Afrika Atsinanana sy Atsimo, ny Komity Mpiaro ny Mpanao gazety, ny Foiben'ny Zon'Olombelona sy ny Lalàna, Ny Tonian-dahatsoratry ny Forum ao Tanzania sy ny Fikambanamben'ny Mpiaro ny Zon'Olombelona ao Tanzania.
Naneho ny fanoheran'izy ireo ny fisamborana tamin'ny alalan'ny fampiasana tenirohy #FreeMaxenceMelo ny mpisera Twitter ao Tanzania sy ny any ivelany.
Amin'ny fiarovana ny tranonkala, hoy ilay Tanzaniana manam-pahaizana momba ny fifandraisana, Maria Sarungi Tsehai hoe:
Zava-dehibe ho an'ny governemanta rehetra ny fanamarihana marina ary manan-danja amin'ny ady amin'ny kolikoly ataon'ny tranonkala mpanao ampamoaka #FreeMaxenceMelo
Nanontany tena ny mpisera hafa hoe nahoana ny any amin'ny rafi-pahefana hafa tahaka ny fandavàn'ny ao Etazonia hamoaka ny tahirin'ny mpiserasera no tsy mitarika ho amin'ny fisamborana. Nanonona ny raharaha ny Birao Federaly Misahana ny Famotorana na FBI sy ny Orinasan'ny teknolojia Apple izy:
Nahoana ny FBI no tsy nisambotra ny tompon'ny apple raha tsy nety nanome ny mombamomba manokan'ny mpiserasera izy ireo?
Nisioka i Pato:
Misioka ny #FreeMaxenceMelo aho satria matoky ny zo omen'ny Lalàm-panorenena ho antsika!
Semkae, mpandrindra ny Policy Forum nanoratra tamin'ny teny Swahili hoe:
Miteraka endrika ratsy ho an'ny firenena ny rafitra ahitana olon-dratsy miriaria malalaka sy ny fanagadrana ny olona mpanaja lalàna .
Nanamarika i Kim Mhando:
Mampihomehy hafahafa, andro vitsivitsy taorian'ny fankalazana ny fahaleovantenantsika, mametra ny fahalalahan'ny ny olom-pireneny ny governemantantsika. Mahamenatra.
Abdul Noor, mpanandra-teny amin'ny fahaiza-mitantana ao Tanzania nanoratra hoe:
Ny filazana an'i ‘Tanzania’ sy ny ‘demaokrasia’ amin'ny fehezan-teny iray dia mitovy amin'ny fanesoana ny teny hoe ‘demaokrasia’.
Nanontany tena i Maria Sarungi Tsehai:
Hatramin'izao, tsy fantatsika izay vondrona mila ny lahatahiry sy ny fanondroana ireo mpiseraseran'ny Jamii Forums … iza izy ireo?
Nandany ny Lalànan'ny Heloka Antserasera ny parlemanta tao Tanzania tamin'ny 1 Aprily 2015, mba hiadiana amin'ny heloka antserasera tahaka ny sary vetaveta ahitana ankizy, ny fandrahonana antserasera, ny fisolokiana anarana antserasera, ny famokarana votoaty mpanavakava-bolonkoditra sy mpankahala vahiny, ny spam [mpanelingelina], ny fitsabahana tsy ara-dalàna amin'ny fifandraisana ary ny famoahana vaovao tsy marina.
Nahazo fanoherana miely patrana avy amin'ireo mpanao politika, zatra fampitam-baovao sosialy, mpamatsy vola sy mpikatroka ny zon'olombelona ny volavolan-dalàna. Nosoniavin'ny Filoha teo aloha, Jakaya Kikwete ho lalàna izany tamin'ny Mey 2015.
Nilaza ireo mpanohitra ny Lalàna mifehy ny heloka antserasera fa manome fahefana be loatra – tsy misy fanarahamaso mavesa-danja – ho an'ny polisy ny lalàna, manome fahafahana ho azy ireo hikaroka ny tranon'izay ahiahiana ho mandika lalàna, handraoka ny fitaovana elektronikan'izy ireo, ary hitaky ny tahirin'izy ireo avy amin'ny mpamatsy tolotra aterineto. Tsy hiadian-kevitra fa hametraka ireo mpitsikera ho ao anaty fisedrana ny raharaha Melo .